BOEING 737 MAX kugadzirisa: Boeing inogadzira ndege isina kuchengetedzeka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » BOEING 737 MAX kugadzirisa: Boeing inogadzira ndege isina kuchengetedzeka
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Dare reUS House reKufambisa rinokumbira Boeing 787 uye 737 MAX zvinyorwa zvekuburitsa
Iyo Boeing inogadzirisa inobvuma mutoro wega we737 MAX tsaona, inohwina chibvumirano chinodzivirira kukuvara kwechirango.
Flyers kodzero dzinofunga kuti izvi hazvina kukwana uye vakati vanogona kuramba vachirwa.
Boeing inogamuchira mutoro wega we737 MAX tsaona, inohwina chibvumirano chinodzivirira kukuvara kwechirango.
Magweta eBoeing akasvitsa chikumbiro chedare pamwe chete neChitatu nemagweta emhuri dzevanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vakafa mutsaona ye157 MAX kuEthiopia, vachibvuma mhosva yega yetsaona yakaipisisa uye kuronga hurongwa hwekugadzirisa zvinenge zvese zvaipomerwa.
Ichi chibvumirano chemhosva yekubvisa kuwanikwa chinoita kuti FlyersRights.org kukwidzana imwe yenzira chete Kuzvidavirira uye Chokwadi nezve MAX tsaona inogona kuwanikwa, pamwe neremangwana Kudzivirirwa kudzivirira kufa kunodzivisika nekuda kwekurembedza, kusakwanisa kana huori kuita sarudzo yekuchengetedza.
Dzimwe nzira ndedzekufumurwa kwemuridzo, kuferefetwa kwemhosva uye kutongwa, kuferefetwa kweCongressioner uchishandisa masimba e subpoena, uye kugadzirisa kuRusununguko rweRuzivo Mutemo.
The FAA yakanyengedzwa simbisa ndege.
Mutongo wa 2019 weDare Repamusorosoro unozivikanwa seArgus Leader unobvumira makambani akadzorwa seBoeing nemasangano ezvekuchengetedza akaita seFAA kuchengetedza kuita kwavo sarudzo dzekuchengetedza zvakavanzika uye kusadzivirirwa kubva kune chero nyanzvi yakazvimiririra yekuchengetedza kana kuongororwa neveruzhinji.
"Mupomerwi, Boeing, akabvuma kuti yakagadzira ndege yaive isina kuchengetedzeka yaive chikonzero chemuripo wemuripo wakakonzerwa netsaona yeEthiopian Airlines Flight 302," faira inodaro.
Boeing yakabvuma pachena kuti vatyairi vendege vaive vasina mhosva.
Yakarerutsawo vatengesi vaviri veMAX: kambani yakavaka kona yejeti yekurwisa sensor uye iyo yakagadzira, kune yakatarwa neBoeing, iyo ndege ine mhosva yekudzora ndege.
Chikumbiro ichi chinosanganisira chinonzi chisungo - chibvumirano chinosunga pakugadzirisa hurongwa - icho chakasainwa nemhuri dzese kunze kwembiri.
Chirevo ichi chinoreva kubhadhariswa kukuvadzwa kwemunhu wega wega kuchagadziriswa kungave mukuyananisa kana mudare muIllinois, uko kune muzinda weBoeing. Boeing inobvuma kusaedza kumanikidza mhuri dzemhiri kwemakungwa, vazhinji vacho muAfrica, kutsvaga kukuvara munyika dzekumba kwavo, uko kukuvadzwa kunenge kwakadzikira.
Mukutaura neChitatu, Boeing akati chibvumirano "chinobvumira mapato kuti atarise kuedza kwavo kuona muripo wakakodzera kumhuri yega yega."
"Boeing yakazvipira kuona kuti mhuri dzese dzakarasikirwa nevadikani mutsaona dzaripwa zvizere uye zvakaringana nekurasikirwa kwavo," chirevo chinowedzera.
Izvo Boeing inowana kubva muchibvumirano kusabatanidzwa kwakajeka kwechero chirevo chekukuvadzwa kwechirango uye kupera kwemaitiro ekuwanikwa kwemutemo kana madhipatimendi ayo aizotsvaga humwe humbowo hwekutadza neBoeing.
"Vatongi havazonzwa humbowo panyaya dzemhosva," inodaro chirevo. "Mapato anobvumirana zvakare kuti hapana humbowo kana nharo pamusoro pekukuvadzwa kwechirango ichave nyaya yekuwanikwa kana kubvumidzwa."
Ralph Nader, mumiriri wevatengi venguva refu anozivikanwa nekushandisa mutemo wekutyora mutemo kuita kuti makambani azvidavirire, akakudana "kugadzirisa kusinganzwisisike pasina Boeing yekuvimbisa chero madhora."
Kubvuma mhosva kwaBoeing ndiko kwave pedyo nekubvuma kuzere kwemhosva kune mbiri dzakafa MAX tsaona dzakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mana nevatanhatu: Shumba Air Flight JT 346 muIndonesia muna 610, ikateverwa neanopfuura mwedzi mina gare gare tsaona muEthiopia.
Nekudaro, zvichiri kutadza kuudza nyika chaizvo zvakakanganisika mukugadzira uye chitupa cheMAX, kuti zvakaitika sei uye ndiani aive nemhosva.
Chakakonzeresa kuparara kweMAX kwaive kutadza kushanda kwesoftware nyowani yekudzora ndege pajeti - iyo Maneuvering Characteristics Augmentation System, kana MCAS - iyo yakamanikidza ndege dzese dziri mbiri kupinda mumhino.
Zvakadaro kambani haina kumbobvira yabvuma pachena kuti dhizaini yeMCAS yaive yakakanganisika seyakasimbiswa, kunze kwekungotaura kuti dhizaini uye kuyedzwa kwaifanira kunge kwakatora nhoroondo yehunyanzvi hwekutyaira ndege uye nguva yekuita mutyairi - dhizaini yainongedza mhosva kune vatyairi.
Boeing inotaura mukuferefeta kuti "haipa mhosva kuna Pilot (Kaputeni), Co-Pilot (First Officer) kana kutsvaga kubatsirikana kana kuenzanisa kuregeredza kwavari."
Chibvumirano ichi chinoti magweta emhuri idzi achabvumidzwa kushandisa zviri pamutemo kuwanikwa kuti vawane zvinhu zvakaita sedata kubva kumarekodha endege. Izvozvo zvichavabvumira kugadzira mufananidzo unoratidza zvakasangana nevakwiri mukati memaminitsi matanhatu endege kuratidza kutya uye kutambura kweavo vakafa.
Mutengo wekupedzisira wemari kuBoeing haugadzirwe kwemwedzi yakawanda. Nekudaro, miganhu iyo chibvumirano chinoisa pazvikumbiro inobvisa kuwedzeredza kwekusava nechokwadi pakambani.
Nemukana wekuwedzera kufumurwa kwechakaipa mumatare edzimhosva, vatungamiriri veBoeing vanogona kuzvisiira kumagweta kuti vatore miripo chaiyo ivo vachienderera mberi.